“Ratiga dambe Ratiga hore saanqaadkiisa ayuu leeyahay!” murti baa tiraa, Xulashadii Maxamed Cusman “Jawaari” loo igmaday Guddoomiyaha Baarlamaankaka dib, ayaa waxaa is qabsaday hambalyada iyo tahniyadaha ku aaddan wax lagu sheegay ISBADAL dhacay, waxayba ka sii dartay markii mudane Xasan Sheekhna loogu shubay inuu noqdo Madaxweyne, lana yiri maanta ayaan haynnaa dad u qalma hoggaanka dalka, oo aqoon iyo khibradba le
Waa hawl adag waase lagama maarmaan wacyigaas ayaana ugu danbayn keeni doona shacab garanaya xaqiisa. Kaas oo dhalin doona in la helo siyaasiyiin ka tarjumaya himilada shacbka. Waxa qasab noqon doonta in siyaasiyiintu raacaan talada shacabka, maxaa yeelay shacabka ayaa awoodda iska leh, inta ka horraysa waxa ay ila tahay in arrinku yahay “af sallax ku dhag.”
I have made this letter longer, because I have not had the time to make it shorter.Prof.Ibarhim
Si kalsoonidii Ummaddu usoo laabato, Caasimaduna ay u noqoto Xarunta Federaalka Somalia. Loolanka Siyasadeed ee Gobalka Banadir